कति वाँकी कलियुगको समय छ ? यसो भन्छ शास्त्र - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
कति वाँकी कलियुगको समय छ ? यसो भन्छ शास्त्र
काठमाडौं । धर्म शास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रेहका छन् । जसमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पर्छन् । हिन्दु शास्त्रका अनुसार चार मध्येको अन्तिम कलि युग हो । यो युगमा मानिसहरुको चरित्र बिग्रने, सभ्यताको नाममा नयाँ समस्याहरु जन्मने भनेर शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।